हातमा सिनेमा नहुँदा पनि किन स्लीम हुँदैछिन् सुष्मा कार्की ?
हातमा सिनेमा नहुँदा पनि किन स्लीम हुँदैछिन् सुष्मा कार्की ?	By नवीन सन्देश on	३ पुष २०७३, आईतवार २२:३४
काठमाडौं । सिनेमा लुटको आईटम गीत “उध्रेको चोली” बाट चर्चित भएकी नायिका सुष्मा कार्की बिगत केही बर्षयता सिनेमा जगतबाट हराएकी छिन् भन्दा फरक पर्दैन । उनले सिनेमा जगतमा कुशल अभिनय गर्ने अभिनेत्री भन्दा पनि बोल्ड र सेक्सी अभिनेत्रीको छबि बनाएकी छिन् ।‍ अहिले सिनेमाबाट टाढा भएपनि शुष्मा फिटनेसमा भने निकै खटिएकी छिन् । हाल उनी शारीरिक व्यायाम र खानपानमा सचेत भएकी छिन् । सिनेमा चलेछ बतास सुस्तरी पछि सुष्माको चर्चा नेपाली सिनेमाबाट ह्वात्तै घटेको हो । उनी सिनेमाबाट हराएपनि उनको माग भने खासै भएको पाईएन ।
तर हालैमात्र एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूलाई फिल्मको अफरहरु आईरहेको र आफूलाई कथा मन परेमा काम गर्न सक्ने बताएकी छिन् । उनले फेरि पनि आफू पर्दामा बोल्ड सेक्सी सिन दिन पछि नहट्ने पनि उल्लेख गरेकी छिन् । चुलबुले स्वभावकी सुष्मा भविष्यमा पढे लेखेको र परिवारलाई समय दिने केटासँग विवाह गर्न सोचमा छिन् । सुष्मा पूजा पाठमा पनि निकै विश्वास गर्छिन् । उनका अनुसार बच्चावृद्धा सबैमा धर्मको आस्था हुनु जरुरी छ ।
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts १४ असार २०७४, बुधबार १६:५७ 0	पीडित बालबालिकाको सहयोगको लागि रीता परियारकाे च्यारिटी
१३ असार २०७४, मंगलवार १०:३५ 0	सलमान भन्छन्-‘बिहे गर्नु भनेको पैसाको सत्यनाश मात्र हो’
११ असार २०७४, आईतवार १३:२९ 0	नीशा र शरदको बिहे असार १६ मा